Iza no tena tompon'andraikitra ireo taxi brousse ANTSIRABE mameno vao maraina eran'ny Anosikelt ireo
Date: 07 février 2018 - 06:20
Mba gaga zaho ny ATT ve sa CUA sa ny Polisy ?
Mino aloha fa tsy ireto farany satria ry zareo ange dia efa eo manomboka @ 5 h maraina ka h@ hariva ka tokony ho jerena akaiky fa dia manao raha tsy manjary é!
En plus izany ny eo Ankadimbahoaka koa raha hifindra eny Ambohimanambola izany dia ahoana no zava misy tsy aleo ve mba jerena akaiky é!
Re: Iza no tena tompon'andraikitra ireo taxi brousse ANTSIRABE mameno vao maraina eran'ny Anosikelt ireo
Par: avadika ho ara-dalana
Date: 07 février 2018 - 09:59
Noheveriko fa izaho irery no nahatsikaritra ilay baranahiny. Raha io fotsiny anefa no jerena dia ohatry ny hoe mahagaga. Fa raha mijery ny firenena iray manontolo, dia tsy tokony ahataitra intsony.
Efa voasoritra ny fombafomban'ireo fiara mpameno eo ireo ka ifanarahan'ny polisy, ny mpanera ary ny mpamily ny zavatra atao. Ny mpandeha koa moa izany tafiditra ao anatiny satria dia tsy vitsy no misafidy ny handray fiara eo.
Raha tsoriny dia ny fahalovana tena lasa lalina eto amin'ny firenena no mahatonga ireny, ka zary soratra fotsiny ny lalana sy izay ifampifehezana, fa ny maro dia mirona amin'ny baranahiny.
Ny hitako ho vaha olana mba tsy hisian'ny fanavahana, dia avela samy ahazo hameno eo daholo ny fiara rehetra, eny hatramin'ny tsy mpitatitra aza. Rehefa mahita ny veatra aterak'izany ireo mpitatitra ireo, dia izy ihany no handray fepetra amin'ny fanalana ireo eo, satria ny polisy efa tsy misy antenaina hampanara-dalana ny olona intsony fa voavidy amin'ny sarany ambany.
Dia mitohy ny gaboraraka, ka lasa fanao tsy azo ihodivirina ny manome ny PR rehetra andalovana. Ny nampiomehy aza, tamin'ny nanirahan'ny mpitondra "mpitandro ny filaminana " tany Andranomanelatra noho ny toe-draharaha TIKO ka nahatonga azy ireo hitoetra andro vitsivitsy tany, dia mivezivazy manodidina ny 10km an'ilay toerana ry zareo, ary dia manotra ihany koa ny fiara izay sendra azy. Hany ka mila ho isaky ny 1km dia misy sakana sy otra foana.
Date: 13 février 2018 - 12:40
Io ary lay nolazaiko hoe hifindra ny stationnement kanefa ry zalahy tsy vonona akory dia ilay fanjakana koa moa malemy dia nihemotra ilay izy mbola ho ela isika gasy ity é!
Date: 13 février 2018 - 15:42
fanontaniana hafahafa koa
anontanio ny eny amin 'ny Ministerany fitanterana sy ry zareo mianakavy
f'angaha misy mahazo miteny hafa tsy ry zareo
Date: 13 février 2018 - 17:00
ndeha ivavaka hoan tanindrazana